Wararka - Waa maxay dhalidda kubbadda jeexdin ee moolka dheer?
Dhamaan kubadaha lagu dhejiyo isku mid maahan. Noocyo kala duwan oo naqshadeyn ah ayaa loogu talagalay inay buuxiyaan shuruudaha gaarka ah, sidaa darteed haddii aadan injineer ahayn ama alaab-qeybiye (xitaa haddii aad mararka qaarkood sameyso), had iyo jeer ma fududa inaad soo xulato midka sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga.
Qaado mid ka mid ah noocyada dhalista ee badanaa la isticmaalo - qoto dheer goolasha kubbadda. Sababtoo ah si isdaba joog ah ayaa loo isticmaalaa macnaheedu maahan inay ku habboon tahay dalabkaaga gaarka ah. Aynu eegno daqiiqadaha soo socda si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Haysashada kubbadaha jeexdin ee qoto dheer xulashada saxda ah maanta? Nala soo xiriir maanta wixii su'aalo ah.
Astaamaha sifaynta kubbadda jeexdin ee moolka dheer
Xaraashka kubbadda jeexdin ee gunta dheer ayaa aad ugu habboon wax ka qabashada culeyska ballaaran iyo xawaaraha orodka degdegga ah Waxay u adkeysan karaan culeyska shucaaca iyo culeyska xaddidan (ama riixida). Marka la soo koobo, waa ikhtiyaar wanaagsan in culeyska kubbadda jeexdin ee qoto dheer uu yeelan doono cadaadis lagu dhejinayo labada dhinac ee wax-soo-saarka laga soocayo wiishka (radial) iyo wiishka (axial).
Halkan waxaa ah maqaal wanaagsan oo sharraxaya farqiga u dhexeeya radial iyo culeyska foosha ee foosha.
Faa'iidooyinka dhalista kubbada jeexdin ee qoto dheer
Marka lagu daro noqosho badan, goos gooska qoto dheer ee jeexdin ayaa bixiya faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan:
· hawl xasilloon iyo hoos u bilaabista Xuddunta
· xulashooyin badan oo saliid / saliidayn ah
Adeegga ugu yar ama shuruudaha dayactirka
Codsiga dhalista kubada jeexdin ee qoto dheer
Hadda oo aad faham fiican ka haysatid waxa goos gooska godka qoto dheer ay yihiin, halkan waxaa ku yaal liistada warshadaha guud ahaan ku tiirsan iyaga:
· Ka shaqeynta cuntada
· qalabka mashiinka
· Ka shaqeynta ilaha
· Daaweynta caafimaadka
· tareenka iyo gaadiidka
· Tamarta dabaysha
Xalal habaysan ayaa la heli karaa